C.kariim Guuleed oo gaadhay Cadaado, Banaanbax ka dhacay, Ciidan qabsaday Goobo Muhiim ah & Waraysi uu bixiyey | Kalshaale
C.kariim Guuleed oo gaadhay Cadaado, Banaanbax ka dhacay, Ciidan qabsaday Goobo Muhiim ah & Waraysi uu bixiyey
Jan 11, 2017 - 20 Aragtiyood
Cadaado (Kalshaale) Wafdi uu Hogaaminayo Madaxweynaha Galmudug C/kariin Xuseen Guuleed oo Shalay ay Kalsoonida kala noqdeen Baarlamaanka Galmudug ayaa Maanta gaaray Magaalada Cadaado.
Garoonka Diyaaradaha Magaalada Cadaado ayaa waxaa si weyn ugu soo dhaweeyay dad aad u badan,waxaana loo soo dhaweeyay si aan horay loogu soo dhaweyn Cadaado.
Magaalada cadaado waxaa sidoo kale Maanta ka dhacay Magaalada Banaanbax lagu Taageerayo Go’aankii Baarlamaanka, Sidoo kalana maamulka Galmudug ayaa ciidamo ku Daadshay Goobo Muhiim ah.
C.kariim Guuleed ayaa waraysi uu bixiyey wuxuu uga hadlay Sida uu uga soo Horjeedo Go’aankii Kasoo baxay Baarlamaanka Galmudug ee Xilka qaaday, Wuxuuna sidoo kale ka hadlay dadka ka danbeeya.
HALKAN KA DHEGAYSO WARAYSIGA C.KARIIM GUULEED
Wuxuu sheegay in laga soo Abaabulay Banaanka Galmudug, iyadoona uu soo jeediyey in Sharciga waafaqsan loo Maro Qaabka Sharciga ah .
Madaxwayne sharciga mari kuwi sameeyay ficilki xumaa
Guuleed waa maskiin aan aqoonin sida loola hadlo Reer Muduga, waa ciyaal Xamar war sida Governor Gaas baro Dhaqanka reer Muduga.
Haduu Cabdi Qeybdiid joogilahaa wuxuu dhihilahaa adeer waxaa noo balan ah Kala reebta- Walaale Majidho nin laga yeelahayo Fowdo.
Xarafka DH Xataa iskama dey dayo Guuleed, War DH baro oo indhaha Basbaas iska mari hakuu gaduuteene.
AWALBA CADAADO KALIYEY AHAYDE TIINA MA KA TAAG TAAGAN TAHAY ALOOW U SAHAL..
Ku lahaa waa la iidoortay oo yaa ku doortay. Baarlmaankii ku doortay oo dhan 54 soo tay dhaheen naga tag, kuma rabnee.
Maxuuse isaga dhejinayaa kursiga. Dantii laga lahaa DAMJADIID weey ka gaartee.
HAWIYE, caqli xumi, waa kaas. Muu isaga taggo sidee CABDULLAHI YUUSUF.
waxas wa la xalinaya sharciga ayan la iskula noqonaya walwal naguma hayan mar hada qori la isku haysan
Warka aaynu haayno, wuxuu sheegayaa in la kala baxay.
Reer XAAJI SULEEBAAN caamo, caruur iyo dhaliyaro iyo dumarba waxeey goosteen in GUULEED uusan joogi karin CADAADO.
Halka GUULEEDNA uu keensaday gafuurculus ilaalisa.
barawani abdulahi yusuf so kii jamac ali jamac kula dagaalamay putland kkkkkkkkk waligis kama tageen ee dowlada fadraalka ayu u sharaxna dimuqaradyad guuled rerkiisa aya laga so gaaray not rerka abdulahi yusuf qof dhintay ina xanto ma jecleyn lakin ada mesha keenay
barawani ma rer xaaji saleeban aya xilka ka qaday mise barlamaan horta hadiiae rer xaji saleban diidan wa madaxwaynahooda sharciga ilaa si sharci ah xilka looga qadayo
Caaway XALIMO MUQDHEER lee u heesa.
Iga daa haasawaha kale ee mari meeyseeeee.
KU AAWAY XALIIMO MUQDHEER:
++ Muqaalkaaga ii muuqda, hadana ma gaari karee
++ inanki barawaani ma hooydo oo hurdo ma seexdee
++ qalbiga dhantaallow, waxba ma xasuustee
++ habeenkii meel cidlaan haahaabtaa
++ kuwaayee, hadmaan ku heliyaa
++ xageese kaa helaaa
SOO BOOD, XALIIMO MUQDHEEER
Ani caaway waxeey iga go’an tahay XALIIMO MUQDHEEER.
Iga dhaaf, siyaasadda
War hadda soo dhacay. Reer XAAJI SULEEBAAN oo caawino militari weydiistay walaalahooda CAYR. Hadda abaabul weyn baa ka socda DHUUSAMAREEB iyo GURICEEL.
300 oo ciidamo ku sheeg ee MAREEXAAN oo ka baxay CADAADO, oo yidhi dagaal qabiilnimo ka qayb noqon meeyno.
Sidaas waxaa loo kala baxay: SACAD, SULEEBAAN IYO CAYR oo dhinac ah.
Sharciga hala ilaaliyo guleed xaq wuxuu u lee yahay inuu wax ka bedelo sababaha kenay xil ka wadistiisa. Waa inuusan ku milmin siyasada damujadiid waa inuu mideya galmudug heshiis ama xoog sida dhusamareeb guricel xarardhere. Iyo dhaman dhulka shabaab joogo..waxa kaloo muhiim ah in la wada ilaaliyo danaha dhacabka aderayaloow dowlad iska dhiga sidani si maahee
barawani sida jeceshahay miya ku riyoonaysa hoostada ka hel waxa la jeceshahay dad muslim ah
Abaayo, macaanto, ma aragtay XALIIMO MUQDHEER??
Nabadeey, waa seexday. Igu salaan XALIIMO MUQDHEER, oo ku dheh:
++ INANKII BARAWAANI DARTAA LEE LA WAASHAY
++ HURDO MA LADO WAA ADII DARAADAA
Intaas lee iga gaarsii.
Mar hore ayey ahayd inuu Cadaado degdeg u tago oo ka garbaxo xildhibaanada Galmuudug.
Gaas wuxuu Xamar uga cararay isaguba waa rabay sida inta doorashada ka dhacayso Xama joogo oo ogaado resultiga ee wuxuu arkay reer Puntland oo isla dhexmaraya, abaar xun ayaa jirta, Qadala Daacish aya qabsatay isna wareerg yuu ku jiraa: qaar parlemanka Puntland ku jira ayaa toos u yiri; Mooshin yaan ka keenaynaa in Gaas la ruqseyo, orod buu ku galay Bossaso una gudbay Qandala oo weliba naftiisa risk ah.
Madaxweyne aan parlemanka shacabka matala ka baqin kaas waa dictatoro weliba lasoo indhacad waxba igama qaadi karaan..
Dhagajuun waa in parlmanka Galmudug ay suuqa u diraan si kan kusoo xiga edeb u yeesho oo fahmo in shacab keensaday parlemanka, inuu shacabkii doortayna u shaqeeyo laga sugayo.
Haddii kale hooyadiis ayuu fuudka la cabin.
Walaahi doqon baa tahay.
Maxaa Kalareebta keenay?? war miyaadan ogeyn in dad misaakiin ah oo gobolada ku nool ayaa maamul ku sheegyadan inay basic service u sameeyan ka sugayaa, aadna u dhibaataysan, baahi u qaba sida School, caafimaad, nabad, isgaarsiin (jid& kommunication) horumarin wixii ilaahay qayraad siiyey xitaa haday Digir&Gocoso tahay uga faaideeya oo habeenkii gaajo ku seexan.
War miyaan dadkaas gobolada dhexe meel kuu damqanayn oo maanta caruurtii gaajo&oon ugu dhimanayaan ayagoo malaygoodii Hobyo lagu ag guranayo.
Waan hubaa inaad tahay kuwii waa aan caruur ahaa Wardhiigley oo deris ahayn, waxaan degenyn meel u dhow gurgii Adan Cadde, kuwo aan ka baqi jirnay oo u bixinay:: Xiimaay&Xaayow!! Balaayo wada boor badan oo foolxun. kkkkkkkkkkkk
Waxaad tahay jaahil weli ka gudbin; wiilkayga xitaa hadduu yahay nin umaddaydii aan dhibka ka saari karin, nama matalo.
Xeebta Hobyo oo ah meelaha aduunka ugu quraxda badan in gaajo loogu dhinta waxaa keenay rag sida Dabshid, Cadaado iyo Guuleed oo ale ah ayey rag moodaan.
Adoo kale waxay ahayd inta dibirseexato loo dhigo in ciida la cunsiiyo, Kalareebta aad sheegaysana gafuurka lagaaga soo jabiyo.
Jamac Cali Jaamac waa Cisman Maxamud, boqorada sadana Majeerteen, asagoo Qordho jooga ayaa asaga iyo wixii uu watay oo Qatar ku ahaa jiritaanka Puntland 50 laga dilay.
Ragga suurto galiyey oo taageeray Cabdulahi Yusuf (AUN)waxay ahaayeen Cismaan Maxamud, wixii dhintayna u arkay qaswadayaal oo laba Cali Isweydiin dhimashadooda.
Inta qaswadaha walaalkiis kula dilayn horumar ha sugin, waayo nin kula qabiil ah oo qaswade ah waxa kuu dhaama shisheeya wadankaaga, dadkaaga iyo caruurtaada mustaqbalkooda ka shaqaynaya. Jamac Cali Jamac ilaa maanta cidna wax kama qorto, weliba in la cafiyo codsaday.
Morgan Majeerteen waxay ku yiraadeen: Somali kuma horgeyn karno ee suuqaaga gal, idina Qaybdiid oo macal Gaaldadii diiden ayaa wadataan! Somali isku aqli maaha.
Galmudug taas ma gaarin…….shacabka gobolada dhexe inay dhulkooda nolol ku helaan kuma rajo weyn kuma qabo waayo asaakiiba ma haysaan.
Guleed galnigs markaan walaga gardaranyhy ee halaga leexdo nimanks tugada ahna halaso xiro kknkkkkkkkkkkkkkkkkkkk Lop ninyahow ninka waxan o qoraal ah aad uqorwysid maxa kugu kalifay o gobalada dhaxase maxaa kagalay ?Ninkaan waba seyn dameerad waar isaaqas iyo hawiyaha lagoolaftan kkklkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk